Ngaba i-Backyard Charcoal Grills Imbi Yakho Impilo Yakho?
Yiyiphi imimiselo yeengqungquthela zamalahle kunye nee-carcinogens?
Iingqungquthela zeebhonkco zingaba yingxaki ngezizathu ezibini. Okokuqala, zombini ilahle kunye neengqithi zitshisa "zingcolile," zivelise i-hydrocarbons kuphela kodwa zincinci ezincinci ezingcolisa umoya kwaye zinokunyusa iingxaki zeentliziyo kunye nemiphunga. Okwesibini, ukugcoba kwenyama kungenza iindidi ezimbini zezinto ezinokubangela i- carcinogenic compounds: i-polycyclic i-hydrocarbons ephosakeleyo (i-PAHs) kunye ne-heterocyclic amines (ii-HCAs).
I-Charcoal Grilling Inokuphelisa Ingozi yomhlaza
Ngokutsho kwe-American Cancer Society, i-PAH ifom xa i-fat fat from meat ehla phezu kwelahle.
Bese bevuka nomsi kwaye bafumane ukufakwa kwiindawo zokutya. Bayakwazi ukwenza ngokuthe ngqo ngokutya njengoko kukhishwe. Ukutshisa iqondo lokushisa kunye nexesha elide lokupheka inyama, ii-HCAs ezininzi zenziwa.
Ii-HCA ziyakwenza kwakhona kwilwanyana e-broiled kunye ne-pan-fried, ingulube, inkohlakalo nentlanzi, kungekhona nje kwiiyo ezigayiweyo. Enyanisweni, abaphandi beSizwe beCarcer Cancer baye bafumanisa ii-HCA ezi-17 ezahlukahlukeneyo ezibangelwa ukupheka "inyama yezidumbu" kwaye oko kungabangela ingozi yomhlaza womntu. Ucwaningo luye lwabonisa ingozi eyongeziweyo yokwanda kwee-colorectal, i-pancreatic kunye neengxube zengxube ezihambelana nokutya okuphezulu okwenziwe kakuhle, ukutya okuthosiweyo okanye okudliwayo.
Ukupheka kwii-Grills zamaChards udibanisa noNgcoliseko lomoya
Ngokutsho kweKhomishoni yaseTexas kwi-Quality Air Quality, i-Texans enqwenela ukuthetha ukuba "iphila kwaye iphefumle i-barbecue" inokuyenza loo nto ukuze ingcolise impilo yabo. Ucwaningo olwenziwa ngo-2003 lulwazi lwaseYunivesithi yaseRic lufumene ukuba iimbombo ezincinane ze-polyunsaturated fatty acids ezikhishwe emoyeni ukusuka ekuphekeni inyama kwi-barbecues zasemva zasiza ekungcoliseni umoya eHouston.
Esi sixeko ngamanye amaxesha kubhalisa amanqanaba omgangatho womoya abeka kuyo enye yeendawo ezidityanisiweyo zaseMelika zaseburhulumenteni, nangona ukukhutshwa kwamabhabhecuti ngokuqinisekileyo kunqabileyo yizo eziveliswa yimoto kunye noshishino.
Zombini i-briquettes kunye neengqayi zomlambo zidala ukungcola komoya. Umsi womlilo, owenziwe ngumbumba ochithwayo ukuze ungeze i-flavour, uphinde ube negalelo ekukhungweni kwamahlathi kwaye ungeze kwii- greenhouse gases emoyeni.
I-briquettes yamachiza inenzuzo yokwenza inxalenye yecaladust (ukusetyenziswa kakuhle kwenkuni yenkuni), kodwa iimveliso ezidumileyo nazo zinokuthi ziqule uthuli lwamalahle, isitashi, i-nitrate ye-sodium, i-calestone kunye ne-borax.
ICanada Iqwalasela Iingozi Zomlilo
KwiCanada, amalahle ngoku umkhiqizo onqandekileyo phantsi koMthetho woMngcipheko weeMveliso. Ngokutsho kweSebe lezoBulungisa laseCanada, ii-bricoal briquettes kwiingxowa ezithengiswayo, ezithengiswayo okanye ezithengiswayo eCanada kufuneka zibonise isilumkiso sobungozi bezingozi ezinokuthi zenzeke. Akukho mfuneko ekhoyo e-United States.
Gwema iingozi zeMpilo ngokuSebenzisa iMali yamanzi
Abathengi banokuphepha ukuzithengiswa kwezi zongezo ezinobungozi ngokubambelela ngezinto ezibizwa ngokuba ngumthi werhasi. Khangela imililo eyenziwe ngamaphesenti ayi-100 eluhlaza, kwaye ayinalo amalahle, ioli, i-limestone, okanye i-petroleum. Iiprogram zokuqinisekiswa kweqela lesithathu, njengeBhunga lokuLawula amaHlathi, linokukunceda ukhethe iimveliso ezivunwa ngendlela ezinzileyo.
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele i-Romeyn B. Ayres
I-Chemistry IsiGama soGama omele Uyazi
20 R & B Iinkwenkwezi ezenza "Siyihlabathi"
1893 Lynching ngoMlilo kaHenry Smith
Yintoni iBronze? Inkcazo, Ukwakhiwa kunye neZakhiwo
Umsebenzi we-Chi-Square nge Candy
Ukuqonda i-French Expression "Pas Mal"
Ziyingozi Kangakanani iiPatata ezihlaza? I-Solanine Poisoning ichazwe
Iingoma ezigqwesileyo zikaLionel Richie ukususela kuma-1980
Yazi uRuss Taff